जो नि: शुल्क कोष निवेश गर्न चाहान गर्नेहरू, उनीहरूको सबैभन्दा लोकप्रिय बैंक जम्माबाट स्टक बजारमा लगानी गर्न वित्तीय साधनहरू छनौट गर्छन्। यदि तपाइँ हरेक दिन वित्तीय बजारहरू ट्र्याक गर्नुहुन्छ भने कुनै समय वा अवसर छैन, त्यसोभए तपाईंले लामो समयको अवधिको लागि लगानी गर्न विचार गर्नुपर्दछ। तपाईं स्वतन्त्र रूपमा बजारको विश्लेषण र ब्रोकर मार्फत शेयरहरू किन्न सक्नुहुन्छ, म्यूचुअल फंडसँग सम्पर्क गर्नुहोस् वा अनुक्रमणिका रकम किन्न सक्नुहुन्छ।
सूचकांक इन्भेस्टमेंट फंड (ईटीएफ) प्रतिभूतियों को एक पोर्टफोलियो हो जो कुनै सूचकांक को आधार बनाइन्छ। स्टक सूचकांक रिश्तेदार संकेतकहरू छन्, जुन नीलो चिप्सको प्रतिभूतिको मूल्यबाट बनेको हो, जुन देशमा सबैभन्दा विकसित कम्पनी हो। उनीहरूले आर्थिक अवस्थालाई घरेलू बजारमा देखाउँछन्। यस्तो देश प्रत्येक देशमा अवस्थित छ। यूएसमा - यो एस एन्ड पी 500 हो, जर्मनीमा - डक्स, र रूस - आरटीएस र एमबीबीबी।
अनुक्रमणिका कोष आधार आधार सूचकांक दोहोरिन्छ। यसमा एक निश्चित देश, क्षेत्र, मूल्यको शेयरहरू सामेल छन्, वा तिनीहरू कम्पनीहरू द्वारा समेटिएका छन् जुन एउटै सामान उत्पादन गर्छन्। ती शेयरहरू दिनभरि लामो किने र बेच्न सकिन्छ। प्रबन्धकको कमी सम्पत्तिको मूल्यको 0.5% हो। यो म्यूचुअल फंड मा ईटीएफ को मुख्य फायदा हो।
MICEX सूचकांकले 45 ठूला कम्पनीहरूको शेयर समावेश गर्दछ। प्रत्येक को विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण अनुपात को पूंजीकरण मा निर्धारित गरिन्छ, तर यो 15% भन्दा बढी हुन सक्दैन। सबैभन्दा ठूलो कम्पनीहरूमा मानव श्रमको एक ठूलो हिस्सा केन्द्रित छ। यसबाट, शेयरहरूको मूल्य बनाइएको छ। स्टकको औसत उपज मुद्रास्फीति दर भन्दा 5% बढी छ। यस पृष्ठभूमिको विरुद्ध, कष्टप्रणालीहरू अधिक प्रभावकारी हुन्छन्। तर लामो अवधिमा ब्याजको पूंजीकरणको सन्दर्भमा, एक सानो आयले राम्रो वित्तीय परिणाम पाउनेछ।
टीआईपी 35 को नाममा पहिलो ईटीएफ टोरंटो स्टक एक्सचेंजमा 1 999 मा दर्ता भएको थियो। यसलाई पछि 1993 मा अमेरिकी एसपीडीआर एस एन्ड पी 500, मूलतः एसपीयू र NASDAQ-100 द्वारा पछ्याइएको थियो। सन् 2000 मा, लगानी बजार बढ्दै गएको थियो। आजसम्म 4,724 लगानी कोषहरू छन्। उनको कुल मात्रा परिसूचक 2.867 ट्रिलियन छ, जसबाट मध्ये 127 अरब डलर मात्र एस एन्ड पी 500 द्वारा गरिन्छ। रूसमा अनुक्रमणिका कोष 2013 मा पहिलो पटक देखा पर्दछ। त्यसपछि मास्को मञ्च एक्सचेंजमा एक ईटीटी नाम FinEx अन्तर्गत दर्ता गरिएको थियो। रूसमा, ईटीटीको आवेदन संघीय कानून "सिक्योरिटीज मार्केट" द्वारा विनियमित हुन्छ। ETF मा व्यापारिक मात्राको सक्रिय वृद्धि 2013 मा सुरु भयो। यस तथ्यले गर्दा कि लगानीकर्ताले ईटीएफलाई म्युचुअल फंडबाट रकम हस्तान्तरण गरे, वार्षिक व्यापारिक मात्राले2करोड ट्रिलियन डलर, 27% वृद्धि भएको छ।
ईटीएफ वी एस म्युचुअल फंड
शेयरहरूको सूचकांक कोषले म्युचुअल फंडसँग समान मानदण्डमा समान छ:
व्यावसायिक व्यवस्थापन (पीआईएफ प्रबन्धकद्वारा व्यवस्थित गरिएको छ, र ETF कम्पनी हो जसले पैसा कमाउँछ)।
प्रविष्टिको न्यून "थ्रेडहोल्ड" (ईटीएफमा, न्यूनतम योगदान एक म्यूचुअल फंडमा मात्र सीमित छ) - न्यूनतम रकम बिक्री एजेंटद्वारा सेट गरिएको छ)।
ईटीएफहरू यस्ता मापदण्डहरूद्वारा म्युचुअल फंडबाट भिन्न छन्:
उच्च तरलता। ETF बेच्न र दिनको समयमा खरिद गर्न सकिन्छ।
म्युचुअल फंड को इकाई मूल्य नेट आस्तियों को लागत मा दिन को अन्त मा गणना गरिन्छ। ETF को मूल्य हरेक सेकेन्डमा परिवर्तन गर्दछ।
म्युचुअल फंडहरूको एकाइहरू ऋण पैसाको लागि खरिद गर्न सकिँदैन। ETF मा, तपाईं "लाभान्वयन" प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
यूआईआईएफहरू केवल एक देशमा व्यापार गर्न सकिन्छ, र कुनै पनि विनिमयमा साझेदारी गर्न सकिन्छ।
म्युचुअल फंड मा, ईटीएफ को विपरीत, आयोगहरु लाई परिकल्पना गर्न सकिन्छ।
अनुक्रमणिका रकमको बजार प्राथमिक (मुद्दा र शेयरहरूको छुटकारा) मा विभाजित छ र माध्यमिक (शेयरहरूको परिसंचरण)। अधिकृत सहभागीहरूले केवल प्राथमिक बजारमा पहुँच गरेका छन्। तिनीहरू शेयरको मुद्दा प्रारम्भ गर्छन्, त्यो, तिनीहरू शेयरको लागि पैसा परिवर्तन गर्छन्, र उल्टो प्रक्रिया सञ्चालन गर्छन् - तिनीहरूले मुद्दाको दोहोर्याउँछन्। शेयरहरू 50,000 शेयरको शेयरद्वारा छुट्याइएको छ। पहिले देखि नै दोस्रो मार्केटमा, कानुनी निकायहरू र व्यक्तिहरूले खरीद र प्रतिभूतिहरूको बिक्रीको लेनदेन गरे।
यूएसएमा, सूचकांक लगानी कोष 1940 को कानून द्वारा नियमन गरिन्छ, जसमा यो खुल्ला म्युचुअल फंडको प्रश्न थियो। यद्यपि ईटीएफले म्युचुअल फंडको धेरै कार्यहरू प्रदर्शन गर्दैन। कहिलेकाहीँ उनीहरूले लगानी विश्वासको रूपमा सिर्जना गरेका छन् र त्यसपछि SEC मार्फत दर्ता गरिएको।
युरोपेली फ्रांसीसी यूसीआईटीएस निर्देशक को आधार मा संचालित 2009 मा अपनाया। उनको विशेषताहरु: सबै निवेशकहरु को लागि खुलापन, सम्पत्ति र प्रकटीकरण प्रक्रिया को कडा विनियमन। एकै समयमा, लक्जमबर्ग वा आयरल्याण्डमा खोलिएको फ्यान सबै युरोपियन युनियन लागू गर्न सक्दछ।
आउनुहोस् हामी थप विस्तारमा विचार गर्नुहोस् कसरी एक्सचेंज अनुक्रमणिका कोष कसरी व्यवस्थित गरिन्छ। पहिलो, कम्पनीले अल्पसंख्यक सम्पत्तिको लगानीकर्ताबाट प्राप्त गरेको सबै रकमलाई निम्तो दिन्छ। धेरै पटक, रकमको 5-10% उठाइयो सम्पत्तिको लागि वायदा खरिद गर्न जुन सूचकांक दोहोरिन्छ। कम्पनीको बाँकी90% आफ्नो विवेकमा निषेधित गर्न सक्छ। तर यो पहिलो मागमा लगानी फिर्ता गर्न बाध्य छ, खातामा लाभान्वयनको प्रतिज्ञा स्तर ले। त्यो हो, ETF ले आफ्नै कोष प्रयोग गर्दैन।
दोस्रो, धेरै कोषहरूले केन्द्रीय बैंकलाई पूर्ण रूपमा स्वामित्व गर्दैन। तिनीहरूले सूचकांकको व्यवहारलाई सम्बोधन गर्छन्। यसको लागि, बैंकको साथ नगद प्रवाहको विनिमयमा एउटा सम्झौता सम्पन्न हुन्छ। क्रेडिट संस्थाले अनुक्रमणिकाको लाभप्रदता सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्दछ , जसको लागि यसले निधिको सम्पत्तिबाट लाभ दिन्छ। यस्तो भर्चुअल पोर्टफोलियोमा, रकमको90% लगानी गरिन्छ। यदि अनुक्रमणिकाले केन्द्रीय बैंकको पोर्टफोलियो भन्दा बढी आय ल्यायो भने, कोषले बैंकबाट मुआवजा प्राप्त गर्यो। विपरित अवस्थामा, उसले आफूलाई बैंकमा फरक पार्छ।
खतरा यो हो कि अनुक्रमणिका कोष सूचकांक देखि अलग नहीं हो सकता। अनुक्रमणिकामा समावेश हुने सबै शेयरहरू प्राप्त गर्नुहोस्, महंगी। प्रत्येक प्रबन्धकले आफ्नो पोर्टफोलियो उत्पन्न गर्न खोज्छ र सधैँ केन्द्रीय बैंकको लागि पर्याप्त प्रतिस्थापन गर्दैन। पहिले यो भनिएको छैन कि सबै कम्पनीले शेयरमा लगानी गर्दैनन्। केहि सूचकांक बैंक जम्मा मार्फत समक्रमण गर्छ। संरचनामा त्यस्ता लगानीहरू क्रेडिट डेरिभेटिभहरूसँग समान छन्। तिनीहरू पनि एक जोखिम जोखिममा छन्। यदि बैंक दिवालिया हुँदै जान्छ भने, त्यसपछि डिप्रेसनको 10% तुरुन्तै हराउनेछ। बाँकी लगानीकर्ताले राजस्व दायित्वहरूको रूपमा प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ।
त्यो हो। RTS पुन: दोहोर्याउने ETF सिर्जना गर्न, तपाईंलाई सूचकांकमा एक वायदा किन्न आवश्यक छ। म्युचुअल सूचकांक रकम सम्पतिहरू दोहोरिने भन्दा सस्ता छन्। सम्पत्ति खरीद गर्दा मामला $ 3,000 तिर्न पर्छ, र जब भाँडा खरिद गर्दछन् - $ 300. बाँकी रकम जम्मामा राख्न सकिन्छ।
भविष्यको शब्द सीमित छ। उदाहरणका लागि, RTS को लागि यो तीन महिना हो। त्यो हो, एक वर्षमा4पटक तपाईंले स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ - अर्कोमा एक तिर्नुहोस्। अनुक्रमणिका कोषले लगानीकर्ता सहभागिता बिना यो अपरेशन चलाउछ। एक लेनदेन सञ्चालन गर्न, विनिमय शुल्क2rubles। कोषको खरिद किन्न र बेच्न आवश्यक छ। त्यो हो, आयोग4आर हुनेछ। या निवेश को 0.044%। वर्षको लागि 0.17% दिनुपर्छ। केवल तरल सम्पत्तिहरू हस्तान्तरण गरिन्छन्। र हरेक अनुक्रमणिका कुनै वायदा छैन। यो स्थिति दोहोर्याउनु हो, कसैले एकै पटक धेरै सम्झौताहरू खरिद गर्नुपर्छ वा धेरै एक्सचेंजहरूमा प्रतिभूति खरिद गर्नुपर्छ। यसले लागत बढाउँछ।
व्युत्पन्न मालिकको खाताको सन्तुलन मूल्य गतिशीलताको आधारमा दैनिक परिवर्तन गर्दछ। स्थापित स्तर तल जमानतमा घटाउनुहोस् तथ्य यो हो कि लगानीकर्ताले छुटेको रकम जमा गर्नु पर्छ, अन्यथा उनको स्थिति हानिकारक रूपले बन्द हुनेछ।
अनुक्रमणिका कोष रणनीतिले ठेक्का निष्पादनको विभिन्न शर्तहरू पनि प्रदान गर्दछ। बढ्दो मूल्यहरूको पृष्ठभूमिको विरोधमा, नयाँ सम्झौता अधिक खर्च हुनेछ।
निधिको "दायाँ" गठनको साथ, सूचकांकमा समावेश गरिएका ती यन्त्रहरू खरिद गर्नुपर्छ, र सूचकांकमा निहित अनुपातमा। एक समस्या प्रबन्धकले कम्पनीहरूको शेयरहरू प्राप्त गर्नुपर्नेछ जुन अर्को2वर्षमा कुनै वृद्धिको आशा छैन, केवल किनभने तिनीहरू सूचकांकमा उपस्थित छन्। दोस्रो समस्या। यदि कम्पनी बढ्न सुरु हुन्छ र बजारमा सकारात्मक गतिशीलता देखाउँदछ भने, व्यवस्थापकले यस कम्पनीको शेयरहरू सूचकांकमा उनीहरूको भन्दा अधिक खरिद गर्न सक्दैनन्। यसबाहेक, जब केन्द्रीय बैंक मूल्य बढ्छ र सूचकांकमा कम्पनीको अंश अधिकतम मूल्यभन्दा बढी हुन्छ, प्रबन्धकले यी प्रतिभूतिहरू बेच्नुपर्छ।
अनुक्रमणिका बांड कोष अविश्वसनीय छ। सबै अन्य वित्तीय संस्थानहरूमा जोखिम जोखिम व्यवस्थापन विधि, बजार उपस्थिति र हानि सीमित गर्ने। अनुक्रमणिका कोष को मामला मा, तपाईं सूचकांक घटने पछि धन कसरी घट्छ।
कोष कसरी छनौट गर्ने?
पहिलो लगानीकर्तालाई के गर्नु पर्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ कि कुन सूचकांकमा लगानी गर्ने। सक्षम टेक्निकल र मौलिक विश्लेषण बिना, यस समस्यालाई सम्झौता गर्न गाह्रो हुनेछ। अनुक्रमणिका रकम स्टक, ब्यान्ड, वस्तु बजार र अचल सम्पत्ति संग काम गर्दछ। अमेरिकन पावरसर्भर डीबीले यूरो, येन, पाउन्ड, क्रोन र फ्रेन्क विरुद्ध डलरको परिवर्तनलाई निगरानी गर्दछ। प्राप्त डेटाको आधारमा, USDX सूचकांक गठन गरिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका कमोडिटी सूचकांक वस्तु वायदा ट्र्याक गर्दछ र आईएसर्सेस ग्लोबल रियल स्टेट कोहोन र स्टीर्स ग्लोबल रियल्टी सूचकांक प्रतिमा राख्छ। एक नयाँ लगानीकर्ताले एस एन्ड पी 500 वा एमआईसीएक्सको लोकप्रिय सूचकांकलाई राम्रो महसुस गर्नुपर्छ। तिनीहरूलाई जानकारी सङ्कलन गर्न र सजिलै संग तथ्याङ्कहरू तुलना गर्न सजिलो छ।
निधि चयन गर्दा, तपाईंलाई दुई मापदण्डहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ: आयोगको आकार र सूचकांक अनुपालन। निधि ठूलो छ, सम्भवतः यो छिटो दिवालियापनको लागि हो। रूसी रकम र म्युचुअल फंडहरूमा सामान्य जानकारी प्रबन्धकहरूको नेशनल लीगको वेबसाइटमा उपलब्ध छ। यद्यपि कानून अनुसार सबै रकमहरू आफ्नो कामको नतीजा नियमित रूपमा रिपोर्ट गर्न आवश्यक छ, एक विशेष संगठन छनौट गरे पछि यो अझै पनि निधि को वेबसाइट मा वित्तीय विवरणहरु को जाँच को लायक छ।
न्यूनतम जम्मामा ध्यान दिन यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। VTB को सदस्य बनें - MICEX सूचकांक "5000 rubles को लागि हुन सक्छ, र" BCS - MICEX "- 50,000 rubles को लागि। रूसी रकमले अमेरिकन भन्दा उच्च आयोगमा चार्ज गर्दछ। पुनरावृत्तिको रकम पनि निधि, डिपोरीरी, लेखा परीक्षक, रजिस्ट्रार, एप्राईजर र प्रतिपूर्तिको विषय हुन् जुन खर्च समावेश गर्दछ। तिनीहरूको अधिकतम आकार ठेक्कामा दर्ता गरिएको छ। उदाहरणको लागि, "VTB" मा 3.7% हो। केवल सबै जानकारीको विस्तृत विश्लेषण पछि एक लगानी गर्न निर्णय गरिनु पर्छ।
लगानी कार्यक्रम अस्पतालों र विद्यालयहरु को निर्माण को लागि एक वित्तीय स्रोत हो
प्रतिभूति बजार र यसको बहुमुखीता को संरचना
प्रतिभूतियों को मूल्यांकन, यसको उद्देश्य
फिल्म "ओडेसा-आमा": अभिनेता, भूमिकाको, षड्यन्त्र, र समीक्षा
मोन्टेनेग्रो, Budva - यात्री समीक्षा Resort Adriatic
Splicing आफ्नै हात: चरण पुस्तिका द्वारा चरण